Tuchel oo ka hadlay barbarihii ay Chelsea la gashay kooxda Everton – Gool FM
Tuchel oo ka hadlay barbarihii ay Chelsea la gashay kooxda Everton
(London) 17 Dis 2021. Tababaraha kooxda Chelsea ee Thomas Tuchel ayaa muujiyay sida uu uga xun yahay kaddib barbardhacii ay Blues la gashay Everton.
Kooxaha Chelsea iyo Everton ayaa dhibcaha ku qeybsaday garoonka Stamford Bridge, kaddib markii ay ku kala baxeen barbardhac 1-1, ciyaar qeyb ka ahayd kulammada 16-aad ee horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan.
Sida laga soo xigtay shabakada BBC Sport Tababaraha kooxda Chelsea ee Thomas Tuchel ayaa wuxuu ciyaarta kaddib la wadaagay warbaahinta:
“Waxaa naga dhashay gool laad xurta ah, madaxa iskama jabin karo hadii aan sidaan u ciyaarno dhanka daafaca, ma aysan helin wax fursad ah oo ay goolal ku dhaliyaan, laakiin waxay sidaas ku sameeyeen laad xor ah, si fiican.”
“Waxaan khasaarinay fursado waxaana ku dhibtoonay inaan helno qaab ciyaareed sarre qeybtii labaad.”
“Qofna kuma heynin kursiga keydka, waxaan dhignay raggii ugu dambeeyay ee la heli karo, waxaan tabnay shakhsiyaadka waaweyn iyo tayadooda.”
Isaga oo ka hadlayay xiddigaha muhiimka ah ee kooxda kaga maqan sababa la xiriira caabuqa Korona Fayras, ayaa wuxuu Tuchel yiri:
“Miyaan u baahanahay inaan joojino tartanka? Arintan kama qayb qaadan doono, dhamaanteen waxaan ka walwalsanahay Korona, wuu inoo dhaw yahay, waxaan heynaa afar kiis oo la xaqiijiyay, waxaana jira kulamo dib loo dhigay, balse kulammadeena dib looma dhigin, marka waa inaan ku dadaalnaa sidii aan ku guuleysan lahayn.”
Si kastaba ha noqotee, Tuchel ayaa ku dhawaaqay kahor inta aysan bilaaban ciyaarta in 4 ciyaaryahan kooxda Chelsea ah uu ku dhacay caabuqa Korona Fayras, kuwaas oo kala ah Romelu Lukaku, Timo Werner, Callum Hudson-Odoi iyo Ben Chilwell.
Liverpool oo garoonkeeda Anfield ku garaacday kooxda Newcastle United… +SAWIRRO
Halyeeyga kooxda Chelsea ah oo weerar culus ku qaaday Bruno sababa la xiriira Ronaldo